တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း – ဝင်းမေတ္တာ
ညနေ (၂၅၈) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၁)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၅၈) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၁) (သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သတ္တဝါများအတွက် ဘယ်တရား၌ ဘယ်အရာကို ပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားပါသလဲ? အဘယ် အကျိုး၊ အပြစ်တို့ကို မြင်တော်မူပြီး ဟောကြား ဆုံးမထားပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း
ညနေ (၂၅၇) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၀)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၅၇) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၁၀) (သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ခံစားမှုဝေဒနာတို့သည် အမျိုးအစား အဘယ်မျှ ကွဲပြားကြပါသလဲ? ရှင်းလင်းပြပါ။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း
ညနေ (၂၅၆) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၉)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၅၆) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၉) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်လိုကျင့်လျှင် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ နာသလဲ? ဘယ်လိုကျင့်လျှင် ကိုယ်သာနာပြီး စိတ်မနာသလဲ? ဘယ်လိုကျင့်လျှင် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ မနာသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း
ညနေ (၂၅၅) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၈)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၅၅) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၈) ( သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ အကုသိုလ်တရား မှန်သမျှတို့သည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်းမူလ ရှိကြပါသလဲ? အဘယ်တရားကို ဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် အကုသိုလ်တရားအားလုံးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြပါသလဲ? နတ်,လူအပေါင်းတို့တွင် အဘယ်တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသူသည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း
ညနေ (၂၅၄) – တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၇)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၅၄) တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း (၇) (သံ ၊ ၂ ၊ ၄၉၁ ။ ဂိလာနဒဿနသုတ်) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနေနည်း